Oops! DDOS တဲ့လား? [Announcement]
Myanmar IT Resource Forum » ADMINISTRATION BOARD » » Announcement » Oops! DDOS တဲ့လား? [Announcement]
1 Oops! DDOS တဲ့လား? [Announcement] on 26th July 2010, 11:25 pm
အဟမ်း... ဒီကနေ့ ညမှာတော့ အထူးသတင်း တစ်ပုဒ်ကို ကြေငြာပါ့မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Forum ပိစိကွေးသေးသေးလေးရဲ့ နာမည်ဂုဏ်သတင်းလေးဟာ ပိုမိုကျော်ကြားလာကြောင်းကို ကျွန်တော် $ƴǩǾ မှ ၊ ယနေ့ ၊ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ ၊ မှာ သိရှိလိုက်ရပါတယ်။
ယနေ့ည မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့် အချိန်တွင် ၊ Myanmar IT Resource ခေါ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Forum လေးကို ၊ အရမ်းလေးစားလွန်းပြီး ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်ကို အားရလွန်းကာ ၊ DDOS ဟုခေါ်သော တိုက်ခိုက်မှုပုံစံတစ်ခုဖြင့် ၊ လူတစ်ယောက်က စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။
သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ယူထားသည့် Free Service ကြီးမှာ ၊ အင်မတန့် အင်မတန် ကောင်းမွန်လွန်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပေးတာကြောင့် ၊ Anti DDOS ဟုခေါ်သော စနစ်ကလေးက အလုပ်လုပ်သွားပါသဖြင့် ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကို အထင်ကြီးလေးစားပြီး ၊ သူ့ရဲ့ ပညာရပ် အကြီးကြီးနဲ့ တိုက်ခိုက်လာသူလေးဟာ ၊ အိပ်ရေးပျက်ရုံသာ အဖတ်တင်သွားပါတယ် လို့ သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ Myanmar IT Resource မှ ၀ိုင်းတော်သားအပေါင်း အနေနဲ့ ၊ မိမိတို့ Forum အား ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ DDOS တိုက်ခံရသည့် နာမည်ကြီး Forum များ၏ စာရင်းဝင်သွားပါသဖြင့် ဂုဏ်ယူနိုင်ကြပါကြောင်း လေးစားစွာအသိပေးအပ်ပါသည်။
အားလုံး ဥပုသ်နေ့မှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေ...
မှတ်ချက်။ ။ Server တစ်ခုလုံးကို တိုက်နိုင်တာတော့ အတော်တော်သကွယ်။ Typlo ကြီးတော့ ငါ့ဆူတော့မယ်.
2 Re: Oops! DDOS တဲ့လား? [Announcement] on 27th July 2010, 2:48 am
ဘယ်ကနေ ထွက်လာပြီး ပြန်ဝင်တိုက်လိုက်တာလဲ
ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သွားသော သူအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်း
ပြောကြားလိုပါတယ်။ အခုမှပဲ လုံခြုံရေးအားစမ်းရတော့တယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
သာဓုပါဗျာ။ သာဓု ပါ သာဓုပါ
3 Re: Oops! DDOS တဲ့လား? [Announcement] on 27th July 2010, 8:33 am
I think this was happen to the whole Forumotion. rite?
The user must attack the whole host if he/she want to attack this site.
anyway gald to here that.
I think we can't trace back to the attacker because we are using free service. We can't go to the hosting management. That's I thought.
I don't know whether $ƴǩǾ can check or not. =)
4 Re: Oops! DDOS တဲ့လား? [Announcement] on 4th August 2010, 2:59 pm
ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေ များလာပြီး Myanmar IT Resource လည်း တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရကြောင်းကို ဒီအပတ်ထုတ်တဲ့ NetGuide Journal မှာသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဖော်ပြလာပါတယ်။
5 Re: Oops! DDOS တဲ့လား? [Announcement] on 5th August 2010, 10:10 am
အရမ်းအားရပါတယ်ညီရေ လုံခြုံရေးကောင်းတော့ စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့
6 Re: Oops! DDOS တဲ့လား? [Announcement]